Sharing: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဧရာဝတီအတွက် ပန်ကြားချက်
NLD on Irrawaddy
Food served: 5.30PM to 7PM,
Program starts: 7PM to 9PM
Place: St Ethelburga’s Centre for Reconciliation and Peace, 78 Bishopsgate, London, EC2N 4AG.
Nearest tube stations: Bank and Liverpool Street.
More information: http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/news-and-reports/public-events/all-events
Venue: Burmese Embassy, 19a Charles Street, London, W1J 5DX
Organised by English PEN
More information: http://www.englishpen.org/events/penevents/worldwidereadingburmassilencedpoets/
Venue: Filmhouse, 88 Lothian Road, Edinburgh EH3 9BZ
“The most powerful political activist for Burma living in Britain”
Buyajoint ticket for Zoya Phan in Conversation and Nargis: When Time Stopped Breathing for just £10 (£8 concessions) when booked together by phone or in person.
More information: http://www.takeoneaction.org.uk/calendar/details/557/
Demonstration outside Burmese Embassy & An Evening with Burma VJs
4th commemoration of Saffron revolution Demonstration outside Burmese Embassy
Evening event to see Saffron Revolution Timeline and discussion
Film: Saffron Revolution Timeline documentary
Date: 27th September 2011 (Tuesday)
Venue: Burma Campaign UK 28 Charles Square London N1 6HT
photo effect from LoonaPix.com
ဓာတ်ပုံတွေကို Frame လုပ်ချင်သူတွေ Effect တွေနှင့် ကစားချင်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မည့် photo editing tools တွေကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာ photoshop လို photo editing software တွေ သုံးတတ်စရာမလိုဘဲ professional ဆန်တဲ့ effect တွေကို online tools တွေမှတဆင့် ပြုလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ effect ပြုလုပ်မည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့် mouse click နှိပ်တတ်ရုံဖြင့် ဖန်တီးရယူနိုင်ပါပြီ ;) ဓာတ်ပုံ effect တွေကို အောက်ပါ site တွေမှာ ပြုလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Photo505LoonaPixWriteOnIt DumprHairmixerPhotoFunia (Mobile Apps available) More similar sites: Click here
1. Run Disk Cleanup Tool :
Follow below steps to run Disk Cleanup Tool :
- Find “Disc” by opening “Windows Explorer”
- Select “Properties” by right clicking “Disc”
- A new window will open, click on Disk Cleanup
- Choose which files to delete from the Disk Cleanup Tool options. You have to tick the checkbox right next to the filename.
2. Turn Unused Windows Features
Its better to remove Windows features that you feel you never use them or they are totally waste. Follow below steps to turn off unused Windows features :
- Click “Start” and find “Control Panel”
- “Control Panel” window will open, find “Programs” options under it
- Simply tick the checkbox if you want particular feature or uncheck the box to disable any feature.
Removing unnecessary programs not only free up disk space but it also makes your Windows system to perform faster. Follow below steps to remove unnecessary programs from your computer :
- Click “Start” and open “Control Panel”
Samsung ကတော့ Apple နှင့်အပြိုင် Mobile တွေ Tablet တွေ လိုက်ပြီးထုတ်နေပါပြီ။ အခုလည်း iphone5မထွက်မီ Galaxy Note ဆိုပြီး 1.4GHz Dual Core Processor ရှိတဲ့ ဖုန်းအသစ်တစ်ခုကို ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ ဖုန်းရဲ့ Detail ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။ Display Screen က 5.3 လက်မဆိုတော့ ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ ဆိုဒ်အနည်းငယ်ကြီးနေတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရတယ်။ အဲဒီတော့ နောက်ပိုင်း ဘောင်းဘီမှာပါတဲ့ အိတ်တွေကိုလည်း ဆိုဒ်တွေကြီးပြီး ထုတ်လာကြတော့မယ်နဲ့တူတယ် :P
Graphic Designer တွေအတွက် အချိန်ကုန်သက်သက်သာသာဖြင့် word clouds တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ပိုင် Photoshop ထဲမှာ ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်ယူပြီး ဖန်တီးရပါလိမ့်မယ်။ Designer တွေ အကြိုက်တွေမယ့် Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်း Design ဖန်တီးရာမှာ ယခုလို tool တွေအသုံးပြုပြီး ဖန်တီးမှသာ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း သက်သာပါလိမ့်မယ်။ Photoshop မှာအသုံးပြုမည့် Brush, Pattern, Shape, Gradient တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူမည့်အစား Photoshop Designer Pack ကဲ့သို့သော package တွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Design တွေကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Font အတွက် အသုံးဝင်မည့် site…
Invitation for Demonstration outside Burmese Embassy
Burma Campaign UK would like to invite you toademonstration in front of the Burmese Embassy in London to mark the anniversary of Hla Hla Win’s arrest in Burma.
Hla Hla Win isayoung Democratic Voice of Burma video journalist (VJ). She was first arrested in September 2009, close to the anniversary of the 2007 monk-led uprising, and sentenced to seven years imprisonment. On 20 December 2009, her jail term was extended by 20 years for violating the Electronics Act, which prohibits downloading or uploading data from the internet that is considered damaging to the security of the military regime. She is now serving 27 years in prison for interviewingamonk and working for DVB.
This protest is part ofaglobal actions organised by the Free Burma VJ campaign of DVB. Protesters will be wearing Hla Hla Win’s mask and stand in front of Burmese embassies around the world with slogans.
Time: 12.00- 13.00
Place: Burmese Embassy, 19A Charles St, London W1J 5DX
မန္တလေးမြို့ မီးဘေးသင့်သွားသော ရတနာပုံဈေးနေရာတွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သော ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာအား ၂၀၁၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရတနာပုံ စူပါစင်တာနှင့် ရတနာပုံ ဒိုင်းမွန်းပလာဇာရယ်လို့ ၂မျိုးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးချိန်မှာတော့ ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာကို မကြာမီ ဖွင့်လှစ်တော့မှာပါ။ ရတနာပုံစူပါစင်တာကတော့ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိပြီး ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းစင်တာကတော့ ပြင်ပကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲသွားမှာပါ။
လန်ဒန်မြို့ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓနေ့ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား (၂၂.၀၅.၂၀၁၁) မှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်စဖွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးပါ။ အဲဒီနေ့က မြန်မာကလေးငယ်များ စုပေါင်းပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်တဲ့ ကဗျာများ၊ အလင်္ကာများ စုပေါင်းရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ ရပ်ဝေးမြေခြား မြန်မာများအတွက် အမိမြန်မာပြည်ကို လွမ်းဆွတ်သတိရစေခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတာလေးတစ်ခုကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်နေတဲ့ (သို့) နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကြီးပြင်းတော့မည့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကို မမေ့ပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်းစေချင်တာပါပဲ။ အဆိုးရွားဆုံးမဖြစ်စေချင်တာကတော့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာလဲ မေးလာတဲ့အခါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောပြနိုင်ခြင်းမျိုး မဖြစ်မိဖို့ပါပဲဗျာ။ အဲဒါ အင်မတန်မှ ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
လန်ဒန်မြို့မှ မြန်မာများရဲ့ ဗုဒ္ဓနေ့စုပေါင်းပူဇော်ပွဲကို နှစ်စဉ် မေလမှာ ကျင်းပကြပါတယ်။
HDR Testing လုပ်ထားတဲ့ ပုံတစ်ခုပါ။ HDR ဆိုတာကတော့ Exposure (အလင်းအမှောင်) မတူညီတဲ့ ဓာတ်ပုံသုံးပုံကို တစ်ပုံတည်းပြန်ပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ software ကတော့ Photomatix ပါ။ HDR လုပ်နည်း video နှင့် software ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာရယူနိုင်ပါတယ်။
လန်ဒန်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ အနှစ်သက်ဆုံးကတော့ ညပိုင်းအချိန်တွေနဲ့ ရာသီပွဲတော်တွေရှိတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သွားရတာဝေးတာရယ် အလုပ်ရှိနေတာရယ်ကြောင့် ညပိုင်းတွေသွားမရိုက်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ညပိုင်းထွက်လိုက်ရင်လည်း တော်ရုံတန်ရုံ အိမ်ပြန်မရောက်ဖြစ်တော့။ ဒီရက်ပိုင်း ညပိုင်းအလုပ်တွေရှိနေမှ ညပိုင်းရိုက်ချင်တဲ့ရောဂါ ထလာပြန်ပါတယ်။ တစ်ရက်လောက်တော့ အေးအေးဆေးဆေးသွားရိုက်ဦးမယ်။ ညပိုင်း ထွက်ရိုက်တိုင်း ဒီ London Eye ကြီးကို အမြဲရိုက်ဖြစ်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျန်တဲ့နေရာတွေ သွားရိုက်ဦးမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလို သဘာဝအလှအပတွေ သိပ်မရှိတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် စက်ရုပ်လို မနားတမ်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေရယ်၊ အဆောက်အဦးတွေရယ်၊ ခေတ်အဆက်ဆက် ခိုးလာ တိုက်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းထားတဲ့ Museum တွေရယ် ဒါတွေကလွဲလို့ ကျန်တာမရှိ။ ညပိုင်းဓာတ်ပုံတွေ ဆက်ပါဦးမည်။